Izixhobo zeNtengiso ze-imeyile ezi-3 Kufuneka wazi ngo | Martech Zone
Izixhobo zeNtengiso ze-imeyile ezi-3 Kufuneka wazi ngazo
NgoMvulo, Juni 11, 2012 NgoLwesine, Julayi 10, 2014 Itempile yaseLavon
Umbhalo wokurhuma -Ukuba usebenza nearhente yokuthengisa nge-imeyile, baya kuba benokunxibelelana neqabane elinikezela ngesicatshulwa ukubhalisa. Umbhalo wokuBhalisa sisixhobo esikhulu sentengiso se-imeyile. Yindlela yokuyeka ukukhulisa uluhlu lwakho lokuthengisa nge-imeyile. Abathengisi bakho be-imeyile bathatha ixesha lokuseta oku ngelixa uhlala phantsi kwaye ubukele iqhuba. Ngomzamo omncinci, uya kubona ukuba kulula kangakanani ukuba abantu babhale imiyalezo ukuze babhalisele ukufumana ii-imeyile zakho.
Ukujonga kwangaphambili kwabaxhasi nge-imeyile - Litmus kwaye Imeyile kwi-Acid. Iinkampani ezilungileyo zokuthengisa nge-imeyile ziya kukuxelela ukuba kufuneka uvavanye ii-imeyile zakho ngaphambi kokuthumela. Ezi zixhobo zimbini zokuthengisa nge-imeyile zikunceda ukuba wenze oku ngokulula nangokungazami. Ungazifaka ii-imeyile zakho kwaye ziyakubonisa ukuba zisebenza njani kwizikhangeli ezahlukeneyo nakwizixhobo ezahlukeneyo zeselfowuni. Kulungile ukunceda ukuqinisekisa ukuba wonke umntu ofumana amaphulo akho e-imeyile ufumana eyona BEST version.
Abavavanyi boMxholo weSifundo. Ukubhala imigca yesifundo kulula. Ukwenza imigca emikhulu yesifundo kunzima. Ukusebenza nezi zixhobo zokuthengisa nge-imeyile: Litmus (kwakhona!) Unokuqinisekisa ukuba ukwindlela elungileyo. Ngokuxhoma umgca wesifundo sakho kwezi zixhobo, unokufumana ingxelo malunga noko kusebenzayo noko kungasebenziyo. Nje ukuba unombono wento engasebenziyo, zive ukhululekile ukuyitshintsha, uyixhome kwakhona, kwaye uzame kwakhona. Unokwazi ukusebenzisa i-Twitter ukuvavanya imigca yesifundo. Chwetheza kwiinguqulelo ezimbalwa ocinga ukuzisebenzisa, unxibelelanise nomxholo othile, kwaye ubone ukuba loluphi uhlobo lwempendulo olufumana kolunye ngokuchaseneyo nolunye.
Kwaye, ewe, ukuba usebenza nearhente yokuthengisa nge-imeyile, banokukunceda uqiniseke ukuba uyazi ngezi zixhobo zahlukeneyo zokwenza iqhinga lakho le-imeyile kunye nemikhankaso ye-imeyile eyona nto banokuba yiyo. Kubalulekile ukuba nesicwangciso sentengiso se-imeyile kwaye ungangxoli ii-imeyile kubabhalisi. Ukuba awunaso isicwangciso okwangoku, unokufuna ukusebenza nabacebisi bokuthengisa nge-imeyile ukwakha isiseko esiqinileyo.
tags: Uqhagamshelwanoemail Marketingimeyile kwi-asidii-litmusabahloli bomgca wesifundoisicatshulwa sokubhalisa
Ithempeli laseLavon yingcali yeDijithali yeMithombo yeendaba kwi BLASTmedia, Ukuphuhlisa izicwangciso zonxibelelwano kubathengi kumashishini ukuya kwishishini bechaza iinjongo, amacebo kunye namaqhinga.
Abaphulaphuli vs abahlali: Ngaba uyawazi umahluko?
Ukujolisa kwangaphambili xa kuthelekiswa nokuBuyisa kwakhona